Daacish oo weerar culus ka fulisay Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Daacish oo weerar culus ka fulisay Puntland
Daacish ayaa waxaa lagu aas-aasay dhamaadkii 2015 dhulka Buuraha ah ee ku yaalla gobolka Bari, waxayna Kooxda loolan kula jirtaa Al-Shabaab.
BOOSAASO, Soomaaliya - Daacish ayaa weerar ku qaadey xalay degaanka Balli-Dhidin, oo ku dhaw magaaladda Boosaaso oo mudooyinkii dambe khatar dhanka amniga ku hayeen kooxaha argagaxisadda.
Weerarka ayaa waxaa lagu dilay gudoomiyihii Tuuladda oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Muumin, iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay dhowr qof oo shacab ah, sida ay sheegeen dadka degaanka, oo qaarkood la hadlay KON.
Sawirka hoose, waa AUN Maxamed Axmed oo ahaa gudoomiyaha Balli-Dhidin.
Saraakiisha maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay in Daacish ay qabsatay Balli-Dhidin kadib markii ay kasoo baxeen Ciidamada, iyadoo xaaladda gobolka Bari ay u muuqato inay faraha kasii baxayso. Degaanka waxuu ahaa tan iyo bishii lasoo dhaafay meel dhaq-dhaqaaqyo Ciidan ka jiraan, oo qaraxyo ka dhaceen.
C/qaadir Muumin oo Kooxda Al-Shabaab kasoo goostay ayaa Daacish lix sano kahor ku aas-aasay buuraha Golis, isagoo billaabatay inuu tababaro siiyo dagaalyahano cusub oo aan tiradooda badnayn, kuwaasoo dhowr jeer weeraro kala kulmay Al-Shabaab.
Puntland ayaa wajahaysa khatarta Daacish iyo Al-Shabaab, oo kusoo xoogeysanaysa gobolka Bari, oo Caasimadiisa Boosaaso u tahay isha dhaqaalaha maamulka Deni oo ku fashilmay amniga.
0 Comments Topics: al-shabaab deni soomaaliya
Ilaa xilligan waxaa si rasmi ah loo ogayn tirada rasmiga ah ee dagaalka ku geeriyootay ama ku dhaawacantay, waxaana sii xoogeysanaya dagaalka u dhaxeeya labada dhinac.